Bandhig Bandhigga xalalka naqshadeynta walxaha adag ayaa faahfaahinta Magaalada waxaa lagu qabtay Oktoobar, 3 illaa Oktoober, 5 2019 magaalada Moscow. Fikradaha horumarsan ee qaybaha dhibta, isboortiga- iyo garoomada ciyaarta, xalalka iftiinka iyo walxaha farshaxanka magaalooyinka shaqeeya ayaa lagu soo bandhigay aagga 15 000 mitir oo laba jibaaran. Xal cusub ayaa loo istcimaalay in lagu abaabulo aaladda bandhigga, halkaas oo halkii ay ka taagnaan lahayd xitaa safyo ay ku yaallay qolyo bandhig, waxaa la dhisay moodhalka yaryar ee magaalada oo ay ka kooban yihiin dhammaan qaybaha gaarka ah, sida: fagaaraha magaalada, jidadka, jardiinada dadweynaha.
Axad 12 Bisha Sagaalaad 2021
Atrium Xafiiska qaab dhismeedka Isgaarsiinta Swiss Evolution Design oo lala kaashanayo istiraatiijiyadda dhismaha ee Ruushka 'T + T architects' ayaa naqshadeeyay dhismeyaal ballaaran oo ballaadhan oo ku yaal xarunta cusub ee shirkadda Sberbank ee magaalada Moscow. Dayax-gacmeedka iftiinka ee maalinlaha ah ee guryahu leeyihiin ayaa leh guryo ay ku shaqeeyaan oo kaladuwan iyo bar kafeega ah, iyadoo dheemanka dheemanka laga joojiyay uu qaab u yahay barxadda gudaha. Muuqaalada muraayadda, muraayadda gudaha ee glazed iyo adeegsiga dhir ayaa ku darsanaya dareenka kala dheereynta iyo sii wadida.
Naqshadeynta Xafiisku Shirkadda injineerinka Jarmalka Puls waxay u dhaqaaqday dhismayaal cusub waxayna u isticmaashay fursaddan aragtida iyo dhiirrigelinta dhaqanka cusub ee iskaashiga shirkadda dhexdeeda. Naqshadaynta xafiiska cusubi waxay wadaysaa isbadal dhaqameed, iyadoo kooxaha soo sheegaya ay si weyn u kordheen isgaarsiinta gudaha, gaar ahaan inta udhaxeysa cilmi baarista iyo horumarka iyo waaxaha kale. Shirkadda ayaa sidoo kale aragtay koror ku yimid shirar aan rasmi ahayn oo aan caadi ahayn, oo loo yaqaanay inay yihiin mid ka mid ah tilmaamayaasha ugu waaweyn ee guusha cilmi baarista iyo hal abuurka horumarka.
Bridal Veil Chandelier Arbaco 22 Bisha Sagaalaad
FinaMill Warshad Wax Talaado 21 Bisha Sagaalaad
Catzz Sariirta Bisadda Isniin 20 Bisha Sagaalaad
Baakada Laambad Silsilad Iyo Dhegaha Dhegaha Bandhig Atrium Naqshadeynta Xafiisku